Adeegga ugu wanaagsan ee Shirkadda Luxury Gawaarida Jet Charter ee Adeegga Duulista iyo Shirkadda Duulista Hawada ee loo yaqaan 'aerospace deadhead pilot pilot lugaha' madoow oo heshiis ah. Kiraysan ah diyaarad Diyaaradaha charter ka ama si aad u socoto soo socda ganacsiga, degdeg ah ama shakhsi! Raadi shirkadda ugu fiican ee heshiiska dawladdu lugta madhan oneway qiimo dhimis. Air Charter Advisors waxaa la abuuray si ay u siiyaan madaxda mashquul, caawiyeyaasha fulinta, iyo wakhtiyada firaaqada ah warqado hal-hal diyaarad gaar loo leeyahay khibrad diyaarad charter wadatashiga. adeegyada Somailand charter jet Our tiraan noocyo kala duwan oo badan oo macaamiisha ka adduunka oo dhan; codsi ma yahay mid aad u weyn, aad u yar, ama aad ka soo caadiga ah.